Thwebula Mail.Ru 5.3.0.19873 isizulu – Vessoft
Mail.Ru – a software ukusebenza nge mail amabhokisi ezahlukene. Isofthiwe isekela umsebenzi nge Google, Yandex, Yahoo, Outlook, Rambler kanye nezinye mail services athandwayo. Mail.Ru ikuvumela ukuba axhumane nabangane, amafayela exchange, buka izithombe uthole izaziso. Mail.Ru isekela inqwaba akhawunti enikeza inkinobho elula phakathi abasebenzayo kanye mail siqu abasebenzisi. Mail.Ru iqukethe izigaba ezihlukahlukene ngemiyalezo okuyinto igcinwa kwimemori idivayisi futhi atholakale umbono ngaphandle uxhumano lwe-inthanethi.
Sebenza izinkonzo ezihlukahlukene mail
Usekela akhawunti amaningi
Ukuvumelanisa kwe-akhawunti phakathi kwamadivaysi
Amazwana on Mail.Ru:
Mail.Ru Ahlobene software:
English, Русский, العربية, Bahasa Indonesia... AIMP 2.00.268